ITHEKU NOHLELO LOKUQAPHA INGQALASIZINDA – Sivubela intuthuko Newspaper
IMEYA yoMkhandlu weTheku, uKhansela uMxolisi Kaunda ofuna kuqinisekiswe ukuphepha kwengqalasizinda yoMkhandlu weTheku.
UMKHANDLU weTheku oholwa nguKhansela uMxolisi Kaunda unohlelo lokubeka eceleni izindodla zemali ezizosetshenziselwa ukuthi kuvikelwe ingqalasizinda yaleli dolobha.
Lokhu lo Mkhandlu uzobe ukwenza ukuze ugweme kukhahlamezeka okubonakale ngesikhathi kuhlasela izibhelu ngenyanga kaJuly.
Imali lo Mkhandlu okuhlaluke ukuthi uzoyidinga ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi lolu hlelo lokuqashwa kwengqalasizinda luyaphumelela ingu-R300 million okuyimali eningi kakhulu.
Ngokwalolu hlelo kuvela ukuthi uMkhandlu weTheku uzogcina sewudinga imali engu-R77, 8 million ukuze uqashe ngokugcwele abantu abazoba yizicishamlilo.
Lapha kukhulunywa ngabantu abangu-96 okumele baqashelwe ukwenza lo msebenzi ochazwa njengobalulekile kakhulu ikakhulukazi ngezikhathi zobunzima.
Lo Mkhandlu uzophinde futhi udinge izizumbulu zemali yona ezosetsheniselwa ukuthi kuthengwe izibhamu ezincane. Kanye nenye imali eningi ezosetshenziselwa ukuthi kuthengwe izimoto ezizohamba ziqaphe idolobha iTheku zibe zihlomile zigade noma yini.
Kudingeka namaveni okuthutha iziboshwa alinganiselwa kwayishumi. Zonke lezi zinhlelo zibonakala zimqoka kakhulu kulo Mkhandlu obalwa neminye yeMikhandlu emikhulu eNingizimu Afrika yonkana.
UKhansela uKaunda ukuchaze njengento omqoka kakhulu ukuvikelwa kwaleli dolobha. Uthe kodwa lonke lolu hlelo luzodinga ukuthi luxhaswe ngezimali ezishisiwe kakhulu.
“Ngikholwa ukuthi kuyinto emqoka kakhulu ukuthi kube khona okwenziwayo ukuze siqinisekise ukuthi iDolobha lethu esilithandayo iTheku liba yilento esiyifunayo thina sonke. Konke lokho kodwa kumele kuqale ekutheni kwenziwani ukuze lizophepha,’’kuchaza uKhansela uKaunda.
UKhansela uKaunda uthe njengamanje iDolobha iTheku lifuna ukuqinisekisa ukuthi konke kubuyela esimweni kuleli Dolobha. Wathi ngenxa yaleso sizathu ke ayikho nencane nje edingekayo engaze iholele ekutheni lo Mkhandlu uzithole futhi sewubhekana nesimo esifanayo nalesi ozithole ubhekana naso ngemuva kokutatshwa kwezitolo kanye nokushiswa kwazo.
Ugcizelele kakhulu ukubaluleka kokuba iDolobha iTheku libonakale linemnotho ozinzile zikhathi zonke.